နီဗားဒါး ITC WIC | JPMA, Inc
သင်သို့မဟုတ်သင်သိသို့မဟုတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူတစ်ဦးဦး WIC န်ဆောင်မှုမှအကျိုးမယ်ဆိုလျှင်, သင်သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခအနီးဆုံးဆေးခန်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ITCN WIC at (775) 398-4960 ။
သင်က app ထဲမှာသင့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံး WIC ဆေးခန်းညာဘက်နေရာချထားနိုင်သည်!
သင်လက်ရှိစျေးဝယ်စာရင်းသို့မဟုတ်သင်၏နောက်ဆုံးလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို အသုံးပြု၍ သင်၏ WIC အစားအစာပစ္စည်းလက်ကျန်ငွေကိုသိရန်သေချာပါစေ။
သင်၏ WIC ပစ္စည်းများအတွက် ၀ ယ်ပါ။ ထို့နောက်ကုန်သွားသည့်လမ်းကြောင်းသို့သွားပါ။ LIC တွင်“ WIC ဤနေရာတွင်လက်ခံသည်” ဆိုသောအမှတ်အသားကိုရှာရန်သို့မဟုတ်“ WIC At Any Lane” ဟုညွှန်းသည့်စတိုးဆိုင်များတွင်ရှိပါကမည်သည့်လမ်းကျဉ်းတွင်မဆိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏နီဗားဒါး WIC EBT ကတ်ကို အသုံးပြု. ပါလိမ့်မည်သောငွေရှင်းကောင်တာတွင်ကိုပြောပြပါသူတို့ကိုသင်သည်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူကူပွန်ပေးပါ။
အဆိုပါ Point-of-Sale (POS) Terminal ကိုအပေါ် "WIC အရစ်ကျ" ကိုရွေးချယ်ပါ, ထို့နောက်သင့်နီဗားဒါး WIC EBT ကတ်ပွတ်ဆွဲပါ။
သင့်ရဲ့ဂဏန်းလေးလုံး PIN နံပါတ်နှင့်စာနယ်ဇင်း "Enter" ရိုက်ထည့်ပါ။
အဆိုပါငွေရှင်းကောင်တာတွင်ကအတည်ပြု WIC အစားအသောက်ကို item ကြောင်းအတည်ပြုမှတစ်ဦးချင်းစီကို item စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါငွေရှင်းကောင်တာတွင်, သင့်ကူပွန်ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါစုစုပေါင်းလူအပေါင်းတို့ WIC အစားအသောက်ပစ္စည်းများနှင့်သင်တစ်ဦး WIC EBT လက်ခံရရှိကိုငါပေးမည်။ သင့်ရဲ့လက်ခံရရှိသင်၏ကျန်အကျိုးအတွက်ချိန်ခွင်လျှာပြသထားတယ်။
သင်စတိုးဆိုင်စွန့်ခွာလာသောအခါသင်သည်သင်၏နီဗားဒါး WIC EBT ကတ်နှင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ITCA WIC အစားအစာစာရင်းအားကြည့်ရန်အောက်တွင်နှိပ်ပါ။
Vista က en Español
ချိန်း - အဘယ်အရာလိုအပ်သလဲ?
သင်သည်သင်၏ WIC အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ချိန်းဘို့အောက်ပါတို့မှမည်သည့်ရောက်စေဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ်
ခိုင်လုံသော / လက်ရှိမူရင်းစာရွက်စာတမ်း (အဘယ်သူမျှမမိတ္တူ) ဖြစ်ရမည်
မွေးကင်းစ / ကလေးများ
အမြိုးသမီးမြားသို့မဟုတ်လူကြီး (မိဘ, အုပ်ထိန်းသူ, သို့မဟုတ် proxy)
ဓာတ်ပုံ ID ကို (ထိုကဲ့သို့သောယာဉ်မောင်းလိုင်စင်, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကဲ့သို့)
အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်း ID ကို
နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားတစ်ခုသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မိဘ / အုပ်ထိန်းသူ၏နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားသည်မွေးကင်းစကလေး / ကလေးနှင့်အကျုံးဝင်သည် (အသုံးပြုသောစာရွက်စာတမ်းတွင်အမည်မဖော်ပြရ) ။
အစီရင်ခံနေအိမ်၌များအတွက်လက်ရှိ Utility ကိုဥပဒေကြမ်းများ
တည်းခိုခန်း / အိမ်ယာများအတွက်ငှားသို့မဟုတ်ပေါင်နှံလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ
လက်ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာနှင့်အတူနီဗားဒါးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်ပြည်နယ် ID ကိုပြည်နယ်
တစ်ဦးက PO Box လိပ်စာနေထိုင်ရာသက်သေပြဘို့လက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါဘူး
ဖြတ်တောက်ကြိုတင် 30 လက်ထက် မှစ. အားလုံးဝင်ငွေပုံမှန်အပါအဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်စသည်တို့ကိုဝင်ငွေအခွန်, လူမှုရေးလုံခြုံရေးအခွန်အခများ, အာမခံပရီမီယံ, ကလေးအထောက်အပံ့ကားငွေပေးချေမှုများအတွက်လုပ်မီဝင်ငွေအားလုံးစုစုပေါင်းဝင်ငွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်:
လုပ်ခ, လစာ, ကော်မရှင်များ, ဒါမှမဟုတ်အခကြေးငွေ
လယ်ယာနှင့် Non-လယ်ယာ Self-အလုပ်အကိုင်အထဲကနေ net ဝင်ငွေ
ငွေစုသို့မဟုတ်ငွေချေးစာချုပ်များအပေါ် Dividends သို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်အသားတင်ငှားရမ်းခဝင်ငွေပေါ် estates သို့မဟုတ်ကိုးစားရာမှဝင်ငွေ,
net ကအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson
သည်အခြားဝင်ငွေလည်းပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်, အတူငွေစု, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ, ယုံကြည်မှုအကောင့်များနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များကိုအပါအဝင်မည်သည့်အရင်းအမြစ်များထံမှလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာငွေသားပမာဏမိသားစုမှအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါ
ဘယ်လို WIC EBT ကတ်အပေါ်မှာငါ့ WIC အစားအသောက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရပါသလဲ?
သင်၏ Nevada WIC EBT ကတ်သည်သင့်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကိုကိုင်ဆောင်ထားလိမ့်မည်။ WIC ဆေးခန်းတွင်သင့်မိသားစု၏ WIC အစားအစာသက်သာခွင့်များကိုယခုလနှင့်နောင်လတွင်စာရင်းရရှိလိမ့်မည်။
သင်၏ WIC ဆေးခန်းသည်သင်၏အစားအစာများကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကိုစနစ်ထဲသို့ထည့်သွင်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ သင်၏မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကိုကိုင်ဆောင်ထားသည့် Nevada WIC EBT ကဒ်တစ်ခုသင့်တွင်ရှိသည်။ သင်၏ကဒ်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုပြသရန်သင့်ဆေးခန်းမှစျေးဝယ်စာရင်းတစ်ခုကိုသင်ရရှိပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်မည်သို့ WIC အစားအသောက်အကျိုးအတွက်လက်ကျန်ငွေ (စျေးဝယ်စာရင်း) ကိုသိကြလိမ့်မည်နည်း
အဆိုပါ WICShopper မိုဘိုင်း app
အဆိုပါသေဆုံးသူ-အခမဲ့အရေအတွက်ကို Call 1-877-234-7056 နှင့်လမ်းညွန်လိုက်နာပါ။
ငါသည်ငါ့ WIC အစားအသောက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
သင်သည်သင်၏အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်မှမဆိုဖြစ်နိုင်သောအပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးရန်သင့်ရဲ့ WIC ဆေးခန်းန်ထမ်းကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ WIC ဆေးခန်းဝန်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရလျှင်သင်၏အစားထိုးကဒ်ကိုမည်သို့ရရှိမည်နည်းဆိုသည့်အချက်ကြောင့်သင်၏လိပ်စာမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းအမြဲတမ်းသေချာပါစေ။
သင်၏ PIN သည်ကုန်စုံဆိုင်၌သင်၏ Nevada WIC EBT ကဒ်ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုထားသောဂဏန်းလေးလုံးရှိသောလျှို့ဝှက်ကုဒ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ PIN ကိုရွေးချယ်သည်အထိသင်၏ကဒ်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သင်၏ပထမဆုံး Nevada WIC EBT ကဒ်ရသောအခါသင်၏ PIN ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။ သင်မှတ်မိရန်လွယ်ကူသောနံပါတ်လေးခုကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့သော်အခြားသူတစ် ဦး အနေဖြင့်တွက်ဆရန်ခက်ခဲသည်။
မည်သူမဆိုရန်သင့် PIN ကိုပြောပြဘယ်တော့မှမ! သင်၏ PIN ကိုသင်၏ Nevada WIC EBT ကဒ်တွင်မရေးပါနှင့်။ သင်၏ PIN နံပါတ်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကသိပါကသင်၏ကဒ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏သက်သာခွင့်များကိုရယူနိုင်သည်။
ငါသည်ငါ့ PIN ကိုမေ့လျော့နေလျှင်, သစ်တစ်ခု PIN နံပါတ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့အ PIN ကိုထွက်တွေ့ကဘာလဲလိုသလား?
မှာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု Call 1-877-234-7056 သစ်တစ်ခု PIN ကိုရွေးချယ်ဖို့။
သင်သည်သင်၏ PIN ကိုမအောက်မေ့နိုင်လျှင်မှာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပဌနာ 1-877-234-7056 ပင်နံပါတ်အသစ်တစ်ခုရွေးရန် PIN နံပါတ်မှားယွင်းနေပါကမှန်ကန်သောနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းသုံးခုရှိလိမ့်မည်။ စတုတ္ထအကြိမ်ကြိုးစားပြီးသည်နောက်၊ နက်ဖြန်နေ့ ၁၂း၀၁ အထိသင်၏ကဒ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရလျှင်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ချက်ချင်းသတင်းပို့ပါ။ သင်၏ကဒ်ပျောက်နေသည့်အချိန်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းအမြဲတမ်းခေါ်ဆိုပါ။ သင်၏အစားထိုးကဒ်ကိုစာဖြင့်လက်ခံရရှိရန်အတွက်သင် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိစောင့်ရပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်မည်သို့ WIC EBT ကတ်ကိုဂရုစိုက်သလဲ?
မည်သူမဆိုရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ခြင်းနံပါတ် (PIN နံပါတ်) ကိုပြောပြဘူး။
သင့်ရဲ့ကဒ်ပေါ်တွင်သင်၏ PIN ကိုရေးဖို့မနေပါနဲ့။
ထိုကဲ့သို့သောတီဗီရဲ့, ရေဒီယို, VCR ရဲ့, မိုက်ခရိုဝေ့, etc အဖြစ်ကွာအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများမှသင်၏ကဒ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်ဝေးသံလိုက်နှင့်အခြား mag-အစင်းကတ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ, ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်) မှသိမ်းဆည်းထား။
အဘယ်အရာကိုငါအဘို့အကြှနျုပျ၏ WIC စျေးဝယ်လုပ်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်?
တစ်စုံတစ်ဦးသည်သင်တို့အတွက်စျေးဝယ်ချင်လျှင်, သင့် WIC ဆေးခန်းန်ထမ်းကိုဆက်သွယ်ပြီး Proxy ထည့်သွင်းအကြောင်းကိုသူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။
စတိုးဆိုင်ရဲ့ WIC EBT ပစ္စည်းကိရိယာများအလုပ်မလုပ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
သင်တစ်ဦးနောက်ပိုင်းမှာအချိန်မှာစတိုးဆိုင်တည်နေရာသို့ပြန်လာစေခြင်းငှါ OR သင်ဆိုင်မှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား WIC-approved စတိုးဆိုင်ကိုသွားစေနိုင်သည်။
ငါရှိပါကငါ၏အ WIC အစားအသောက်ပစ္စည်းများများထဲမှ scan သို့မဟုတ်မည်မဟုတ်အဘယ်အရာပါလျှင် "မလုံလောက် Balance?"
အကယ်၍ စတိုးဆိုင်၏ WIC EBT စနစ်သည်သင်၏ WIC ၀ ယ်ရန် WIC အတည်ပြုထားသောအစားအစာကိုခွင့်မပြုပါကထိုပစ္စည်းအားထိုစတိုးဆိုင်အတွက်လက်ရှိ WIC အတည်ပြုထားသောအစားအစာများစာရင်းတွင်မပါဝင်ပါ။
ငွေကိုင်ကသင့် WIC အစားအစာတစ်ခုခုအတွက်သင့်တွင်“ လုံလောက်သောလက်ကျန်ငွေမရှိ” ဟုပြောလျှင်သင်၏ရရှိနိုင်သည့်လက်ကျန်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ သင်၏လက်ကျန်ငွေကဖော်ပြသည်ထက်အစားအစာပိုမို ၀ ယ်ရန်သင်၏ Nevada WIC EBT ကဒ်ကိုသင်မသုံးနိုင်ပါ။
အကယ်၍ စတိုးဆိုင်သည်အမှားတစ်ခုလုပ်မိပြီဟုသင်ထင်ပါကသင်အမှားသတိထားမိလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနသို့ဖုန်းဆက်ရမည်။ စတိုးဆိုင်နှင့် WIC ဆေးခန်းများသည်ပစ္စည်းများကိုသင်၏ Nevada WIC EBT ကဒ်သို့ပြန်မပို့နိုင်ပါ။ သင်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုတင်ရန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်ရမည်။
သင်သည်သင်၏ PIN ကိုသတိရသို့မဟုတ်သင့် PIN ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုခငျြလို့မရဘူးလျှင်။
တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကို file မှ